Ixesha kunye nabahlobo 26
Kufuneka sibuze umbuzo ngaphambi kokuba siwuphendule. Bambalwa abantu abayeke ukucinga ukuba kuthetha ukuthini xa besebenzisa amagama anjengomoya nawokomoya. Ukuba iinkcazo bezifuneka kwaba bantu bambalwa abanokuziva ukungazi kwabo ukuba la magama athetha ntoni. Kukho isiphithiphithi esingaka ecaweni njengokuba siphuma kuyo. Abantu bathetha ngoomoya abalungileyo kunye nemimoya engendawo, oomoya abalumkileyo kunye nemimoya yobudenge. Kukho ke kuthiwa kukho umoya kaThixo, umoya womntu, umoya wedemon. Kukho imimoya eliqela yendalo, enjengomoya womoya, wamanzi, womhlaba, womlilo, kunye nomoya unxulunyaniswa notywala. Isilwanyana ngasinye sidalwe sinomoya othile kwaye ezinye izibhalo zithetha ngayo eminye imimoya ethatha izilwanyana. Inkolo eyaziwa ngokuba yiNkolo yoKomoya, okanye ukuSebenza ngeMimoya, iyathetha ngemimoya egada, ukulawula imimoya nomhlaba womoya. Umntu othanda izinto ezibonakalayo uyala ukuba ukhona na umoya. Inkolo eyaziwa ngokuba yiChristian Science, isebenzisa inkululeko yegama, yongeza ekudidekeni kwaye iyisebenzisa ngokulula. Akukho sivumelwano malunga nokuba ngowuphi umoya okanye imeko okanye igama elithi okomoya elisebenza kulo. Xa igama elithi ngokomoya lisetyenziswa, ngokuthetha ngokubanzi, lenzelwe ukugubungela iimpawu, iimpawu kunye neemeko ekucingelwa ukuba aziyonto eyokwenyama, hayi eyokwenyama, hayi eyasemhlabeni. Ngale ndlela siva ngobumnyama bokomoya, ukukhanya kokomoya, ulonwabo lokomoya, kunye nosizi lokomoya. Omnye uxelelwa ukuba abantu babone imifanekiso yokomoya; umntu umva umntu ngokomoya, amazwi okomoya, iimvakalelo zokomoya kunye neemvakalelo zokomoya. Akukho mda ukuya ekusetyenzisweni kwamagama omoya kunye nawokomoya. Ukudideka okunjalo kuya kuqhubeka okoko abantu bengavumi ukucinga ngokuqinisekileyo ukuba bathetha ntoni okanye bavakalisa ntoni ngolwimi lwabo. Kuya kufuneka sisebenzise amagama achazayo ukumela iingcinga ezichanekileyo, ukuze imibono eyaziwayo yaziwe. Kuphela sisigama esichaziweyo esinokuthi sithembe ukutshintsha izimvo kunye nokufumana indlela ngokudideka kwengqondo kwamagama. Umoya sisiseko esiphambili kwaye sikwimeko yokugqibela, ekumgangatho, okanye imeko yazo zonke izinto ezibonisiweyo. Eli lizwe lokuqala nelokugqibela likude kude nohlalutyo lomzimba. Ayinakubonakaliswa ngokuhlaziywa kweekhemikhali, kodwa inokubonakaliswa kwingqondo. Ayinakho ukubhaqwa ngugqirha wegqirha, okanye ngochwephesha, kuba izixhobo zabo novavanyo azizukuphendula, kwaye ngenxa yokuba azikho kwindiza enye. Kodwa inokungqinwa engqondweni ngenxa yokuba ingqondo yeyolo hlobo kwaye ingaya kulolo hlobo. Ingqondo inxulumene nomoya kwaye ingayazi. Umoya ngulo oqala ukushukuma kwaye usebenze ngaphandle kwento yomzali. Into yokuba ngumzali womoya ayisebenzi, ayintshukunyiswa, ayisekho, ayithethi nto kwaye ayithethi ngokwayo, gcina xa inxenye yayo isuka ngokwayo idlula kwixesha lembonakalo ebizwa ngokuba yi-ebusweni kunye nokuzivelela kwezinto, kwaye ugcine xa loo nxalenye ishiyekileyo ibuyela kumzali wayo. into. Phakathi kokumka nokubuya kwezinto zomzali azikho njengoko kuchaziwe ngasentla.
Into xa ithe yakhutshwa ayisiyonto ingako, kodwa ingumbandela kwaye injengomlilo omkhulu, ulwandlekazi okanye umhlaba xa usiya kwisangqa, yonke into yenziwe ngamasuntswana. Inxalenye nganye, njengoko injalo iyonke, iphindwe kabini kwisimo sayo kwaye ayibonakali. Yinto yomoya. Nangona isuntswana ngalinye linokuthi kwaye emva koko lidlule kuwo onke amabanga kunye neemeko, kodwa alinakwenza nangayiphi na indlela nangayiphi na indlela ukusikwa, ukwahlula okanye ukwahlulahlula ngokwayo Esi simo sokuqala sibizwa ngokuba sesomoya kwaye nangona sikwimo emibini, ukanti singenakuhlukaniswa, into yomoya ingabizwa ngokuba ngumoya xa ukule meko yokuqala okanye yokomoya, ngenxa yokuba umoya uphambili.
Ukulandela isicwangciso ngokubanzi sokujonga ecaleni okanye ukubonakaliswa kulo mbandela wokomoya, womoya okanye wengqondo, umba udlulela kwisibini kunye nesezantsi. Kule meko yesibini imeko yahlukile kunasekuqaleni. Ubume kumcimbi ngoku bubonisiwe ngokucacileyo. Inxalenye nganye ayisabonakali ibonakala ihamba ngaphandle kokuxhathisa. Inxalenye nganye iyazenzekela, kodwa iyadibana nokuchasana nayo ngokwayo. Inxalenye nganye kwisidalwa sayo yenziwa malunga nokushukumayo kunye nokushukumayo, kwaye nangona zimbini kubume bayo, ezi zinto zimbini zidityanisiwe njengamnye. Ngamnye usebenzela ukwenza enye kwenye. Izinto ngoku zinokubizwa ngokufanelekileyo ngokuba zizinto zomoya, kwaye imeko apho imeko-yomoya inokubizwa ngokuba yimeko yobomi yomoya. Candelo ngalinye elikulo mmandla nangona libizwa ngokuba yinto yomoya lilawulwa kwaye lilawulwa yiloo nto ngokwayo, umoya, kunye nomoya kwinto nganye yomoya-ulawula elinye icandelo okanye ubunjani bayo ngokwayo into ebalulekileyo. Kwimeko yobomi bomoya-umoya, umoya usesona nto siyinto yokulungiselela. Njengoko amasuntswana omoya omoya eqhubeka ekubonakaliseni okanye ekungeneleleni kuwo aya esinda kwaye enobunzima kwaye ecothisa ekunyakazeni kwawo de adlulele kwifomu yesimo. Kwimo yithi amasuntswana ayesimahla, azenzele, kwaye ehlala esebenza ngoku ayabuyiselwa kwiintshukumo zawo. Oku kubuyiswa kwemicimbi kungenxa yokuba umbandela wenxalenye ulawula ubume bento kwaye ngenxa yokuba amasuntswana esebenzisana kunye nawo wonke umhlaba, umbandela wamasuntswana ulawula ubume bomoya. Njengoko amasuntswana e-coalesces edityaniswa kunye nokudityaniswa kunye ne-particle, eba denser kunye ne-denser, ekugqibeleni bafika kumda wehlabathi lezinto ezibonakalayo kwaye umba ke ungaphakathi kwesayensi. Njengoko ikhemistri yafumanisa abalinganiswa obahlukileyo okanye iindlela zento bayinika igama lezinto; kwaye ke sifumana izinto, zonke ezo zibalulekileyo. Into nganye edibanisa nabanye ngaphandle kwemithetho ethile, imigaqo, i-precipitates kwaye ibekwe ngaphakathi njengento eqinileyo ejikeleze thina.
Kukho izinto ezibonakalayo, izinto zokomoya, ubomi, nezinto zokomoya. Ubume bezinto ezibonakalayo zezeseli; izinto eziyilwe ziimolekyuli; izidalwa zobomi ziatomic; izinto zokomoya ezizezomoya. Umchiza unokuvavanya ngokwasemzimbeni kunye nokuvavanywa kwimolekyuli, kodwa engekafiki kwimeko yento yomoya ngaphandle kohambo. Umntu akanakubona okanye angabuboni ubomi nokuba yinto yokomoya. Umntu uyayibona okanye ayive le nto ahlangane kuyo. Izinto ezibonakalayo ziqhakamshelana neengqondo. Izixhobo zivakalelwa kwiimvakalelo ezihambelana nazo. Ukubona into yomoya okanye izidalwa zomoya, ingqondo kufuneka ikwazi ukuhamba ngokukhululekileyo ngaphandle kweempawu zayo. Xa ingqondo inokuhamba ngokukhululekileyo ngaphandle kokusebenzisa amandla ayo iyakuqonda into yomoya kunye nezinto zobomi. Xa ingqondo ikwazi ukuyibona loo nto iya kuba nakho ukwazi izinto zokomoya. Kodwa izinto zokomoya okanye izinto eziphilayo ezaziwa ngolo hlobo azizo kwaye azinakuba zizidalwa zeemvakalelo ngaphandle kwemizimba yenyama, ezingakhathaliyo kwaye ngokungakhathali zibizwa ngokuba yimimoya okanye izinto zokomoya, kwaye ezinde kunye nenkanuko yenyama. Umoya usebenza nendoda ngokokulingana njengoko umntu efumana ingqondo yakhe kwimeko yomoya. Oku akwenzayo ngengcinga yakhe. Umntu kwelona nqanaba lakhe liphezulu ngumntu wokomoya. Kwinxalenye yakhe yengqondo ungumntu ocinga. Ke kwiminqweno yakhe yendalo uyisilwanyana. Simazi njengomntu wenyama, athi ngaye sisibone isilwanyana, sihlala sidibana nomntu osicingelayo, kwaye ngamanye amaxesha anqabileyo sifumana ukumbona njengomntu wokomoya.
Njengomntu wokomoya umntu oyintloko yendaleko, eyona nto iphambili iphambili ekubonakalisweni kwayo. Umoya ekuqaleni kokungasebenzi okanye ukubonakalisa akubonakali.
Njengombandela wokuqala womoya obandakanyeka ngokuthe ngcembe, inqanaba ngezigaba, ukusuka kurhulumente ukuya kwelinye, kwaye ekugqibeleni loo nto yayiyeyokomoya ibanjwe ebukhobokeni kwaye iboshwe kwelinye icala lendalo ngokwayo ebaluleke, ngoko umoya ngokuthe ngcembe, inyathelo. ngamanyathelo, iphinda iphakamise ukugqwesa kwayo kumcimbi wayo, kwaye, ukoyisa ukumelana nomcimbi ngokwayo, ekugqibeleni iphinda ilungelelanise loo nto inyathelo ngenyathelo ukusuka kumzimba omkhulu, kwilizwe lomnqweno, ngamanqanaba amade okugqibela ekufikeleleni kwilizwe lehlabathi. ukucinga; ukusukela kweli nqanaba unyuka ngomnqweno wokufikelela ekufezekiseni okokugqibela kunye nokufikelela kwihlabathi lomoya, ilizwe lolwazi, apho liziphinda liziqonde ngokwalo emva kokuhlala kwalo ixesha elide kumhlaba ongaphantsi komhlaba kunye neemvakalelo.